I-Agriturismo Osea, ifulethi lonke
Bivio Santo Stefano, Toscana, i-Italy
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Sara
Nethezeka nomndeni wonke kule ndawo yokuhlala enokuthula, ehlala emaphandleni aseTuscan, imizuzu eyi-10 ukusuka eSiena nasenqabeni yaseMonteriggioni, eduze kakhulu nomzila waseFrancigena namagquma aseChianti. Ifanele kakhulu imindeni enezingane kanye nalabo abafuna ukucwiliswa empilweni yezwe.
Ifulethi (75 sqm) litholakala esitezi sokuqala sendlu yasepulazini futhi liqukethe: indawo yokungena, igumbi lokulala eliphindwe kathathu, igumbi lokugezela elikhulu, igumbi lokuhlala, ikhishi kanye nethala elikhulu. Singahlinzeka ngombhede owengeziwe noma umbhede. Ifulethi ligcwele zonke izinto ezidingekayo (izitsha, amabhodwe, njll.), kanye neminye imidlalo nezincwadi zezingane.
Ifulethi lisendaweni yasepulazini emaphandleni avulekile. Izikhungo ezihlala abantu eziseduze yiBadesse neQuercegrossa zombili eziqhele ngamakhilomitha amabili, lapho kunezitolo ezinkulu, amabhange, amahhovisi eposi, imigoqo kanye nezindawo zokudlela.
Sihlala esakhiweni esifanayo futhi sisebenza epulazini, ngakho siyatholakala nganoma iyiphi inkinga noma isicelo esiphuthumayo esivela kubavakashi.
Izivakashi zingathenga imifino namaqanda amasha emikhiqizweni yethu.